आउनुहोस्- ओलीविरुद्ध संयुक्त मोर्चा कसौँ ! - Samajik Patra
तराई–मधेसका कवि, लेखक, कलाकारहरू पनि ओली सरकारको निसानामा पर्नुपरेको छ । तराई–मधेसका स्थापित पारस ठाकुरलाई पटक–पटक गिरफ्तार गरेर दुःख दिइयो । उहाँ पनि गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नेपालीलगायत मैथिली र भोजपुरी भाषामा राम्रो गीत–कविता लेख्नु गर्नुहुन्छ । क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको किल्लाको रूपमा परिभाषित तराई–मधेसमा ओली सरकारले निरन्तर दमन बढाएको छ । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको त झन् के कुरा गर्नू ! ओली सरकारले खोमा तरामु, पारश पहाडी मगर, हरिलाल महतरा, सिद्धराज खड्कालगायत ठूलो सङ्ख्याका कवि, लेखक, कलाकारहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने, झुट्टा मुद्दा लगाउने गरेको छ । हरिलाल महतरा र सिद्ध खड्का त शिक्षक पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरू सुर्खेतका स्थापित कवि तथा लेखक पनि हुनुहुन्छ तर पनि उहाँहरूले ठूलो मानसिक यातना खेप्नुप¥यो । सुर्खेतमा गिरफ्तार हुनुभएका कवि, लेखक, कलाकारलाई सत्तारुढ पार्टीमा भित्र्याउने योजनाअनुरूप चर्को हल्लाखल्ला पनि गरियो । त्यो हल्ला काठमाडौंसम्म पनि आइपुग्यो । पछि वस्तुस्थिति बुझेपछि तिनका षड्यन्त्र चकनाचुर भयो । यसरी पनि ओली सरकार क्रान्तिकारी कवि, लेखक, कलाकारहरूको तेजोबध गरिरहेको छ । यी क्षेत्रबाट पनि ओली–शासनका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध भइरहेको छ ।
ओली सरकारले उपत्यकावरिपरि झन् चर्को दमन गरिरहेको छ । यो उसको श्वेतक्षेत्र पनि हो । ओली सरकारले उपत्यकाका कवि, लेखक, कलाकारहरूलाई प्रत्यक्ष निसानामा पार्ने गरेको छ । ओली सरकारले पटक–पटक माइला लामा, खेम थपलिया, कुशल बोगटीहरूलाई पक्रेको छ, जेल तथा हिरासतमा राखेको छ । प्रतिबद्ध, वीपी विद्रोही, रसुवाली कवि, वैरागी जेठाहरूलाई गिरफ्तार गरेर दुःख दिएको छ । जनकलाकार कुशल बोगटीले विनाकारण डेडवर्ष जेल बस्नुप¥यो । कवि सङ्गीत स्रोतालाई प्रशासनले झुक्किएर पक्राउ गरिएको भनेर जग हँसायो । ओली सरकारले नाटक लेखेको, सरकारविरुद्ध लेख लेखेको र कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएको आरोपमा खेम थपलियालाई पटक–पटक गिरफ्तार गर्ने, हिरासतमा राख्ने, झुट्टा मुद्दा लगाउने कूकृत्य ग¥यो । उसले चार सय बढी माक्र्सवादी किताब र कम्प्युटरसमेत उठाएर लग्यो । लेखनकार्य गरिरहेको लेखकलाई हत्कडी लगाएर चार–चार घन्टासम्म उसकै कार्यालयमा उभ्याएर सियो खोजेजस्तो गरी खोजेर सारा चीजसहित हिरासतमा पु¥याइनु सभ्य समाजका लागि असामान्य परिघटना थियो । सिर्जनात्मक र विचारधारात्मक कार्यक्षेत्र भएका कवि, लेखक, कलाकारहरूलाई ओली सरकारले महादुश्मन देखिरहेको छ । ओली सरकारले कवि, लेखक, कलाकारहरूको कलमलाई बम, बारुद र क्षेप्यास्त्र देखिरहेको छ ।
यथार्थतः ओली सरकार कवि, लेखक, कलाकारहरूबाट सर्वाधिक आतङ्कित बनेको छ । यो क्षेत्रबाट ओली–शासनका विरुद्ध भएको प्रतिरोध ऐतिहासिक छन् ।
ओली सरकारले जनताका कलाकार सामना सांस्कृतिक परिवारलाई पनि छोडेन । उसले सामना परिवारका दर्जनौँ कलाकारलाई गिरफ्तार ग¥यो । थुप्रै ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न दिइएन । कलाकारलाई कार्यक्रमस्थलबाटै गिरफ्तार गरेर झुट्टा मुद्दा लगाइयो । सरल माझी, आरोह नेपाली, लक्ष्मण पाख्रिनलगायतका कलाकार पटक–पटक ओली सरकारको निसानामा पर्नुप¥यो । आरोह नेपालीले लामो समय जेल जीवन गुजार्नुपरेको थियो । उहाँहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा नाच्न, गाउन दिइएको छैन । गीत गाउनु र नाच्नुलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै ओली सरकारले जनताका कलाकारलाई यो धर्तीमै खुट्टै राख्न नदिने हर्कत देखाउँदै छ । जनयुद्धको उठान, विस्तार र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिकाका साथ महान् इतिहासको रचना गर्दै आएको सामना परिवारलाई यतिबेला सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ओली सरकार सामना परिवारको नामोनिसान मेटाउन मरिमेटिरहेछ । ओली सरकार चुनु गुरुङ, शारदा श्रेष्ठ, हर्षबहादुर शाही र च्याङ्बा लामाहरूको ठूलो अपमान गरिरहेछ । आजको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सामना परिवार जनताको घर–दैलोमा जनताकै माया र स्नेहले बाँचिरहेको छ । उसले आफ्नो कला र गला तिखारिरहेको छ ।
गोलघर बन्दीगृहमा कविता फुर्दा कपी नपाएर चुरोटको खोलमा कविता लेखेको गफ दिने तिनै केपी ओली आज जनताका कवि र कवितामाथि प्रतिशोध साँधिरहेका छन् । ओलीको हददर्जाको निकृष्ट व्यवहारबारे प्रवुद्ध वर्गले भनिरहेका छन्– बिरामीलाई अस्पतालको बेडबाटै गिरफ्तार गर्ने राज्यसत्ता खरानी बनोस् ! हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ को दार्शनिक पुस्तकहरू, अनिल शर्माले कविता लेख्ने कलम र माइला लामाले सङ्गीत निकाल्ने हार्मोनियम र गिटारहरू ओली–शासनका लागि बमसरह बनेका छन् । कलम, कुची र हार्मोनियम चलाउने यिनै हातहरूले साँच्चै बन्दुक चलाउन थाल्यो भने के होला ? यतिबेला टर्कीका हेलेन बोलेक, इब्रु तिम्तिकहरूले बलिदान दिइरहेका छन् । जेनएन साइबाबा, वरवर रावहरू भारतीय जेलभित्रै सङ्घर्ष गरिरहनुभएको छ ।
नेपालमा हेमन्तप्रकाश ओली, अनिल शर्मा र माइला लामाहरू जेल तथा हिरासतमा कठोर जीवन बिताइरहनुभएको छ । फासिवादी ओली सरकारले निसाना कवि, लेखक र कलाकारलाई साँधिरहेछ, जनताको साहित्यिक सम्प्रभुतामाथि गम्भीर आघात पु¥याइरहेछ । सिङ्गो देश बन्दीगृहमा परिणत भएको यतिबेला हामी एकताबद्ध हुनुको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले आउनुहोस्– सामाजिक फासिवादका विरुद्ध संयुक्त मोर्चा कसौँ ।
बुधवार, भाद्र २४ २०७७०३:०८:३९
खेम थपलिया नेकपा विप्लब